January 2018 - MoviesFan
အမှန်အကန်လန်းတဲ့ ‘Ant-Man and The Wasp’ Trailer
Ant-Man and The Wasp ဟာ ဒီနှစ်အတွင်းထွက်ရှိမယ့်ဇာတ်ကားတွေထဲက အမှန်အကန်စောင့်မျှော်နေရတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုဆိုရင် မမှားပါဘူး။ အခုတော့ ဒီကားရဲ့ပထမဦးဆုံး Trailer ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး စောင့်မျှော်ရကျိုးနပ်လောက်အောင် အမှန်အကန်လန်းပါတယ်။ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး..
ဒီ Trailer အရဆိုရင် Ant-Man and The Wasp ဟာ Marvel Superhero ဇာတ်ကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဟာသနဲ့အက်ရှင်ကိုရောထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါ။ Trailer ထဲမှာပါဝင်တဲ့အချို့အခန်းလေးတွေဆိုရင် ပထမ Ant-Man ဇာတ်ကားကိုတောင် ပြန်လည်သတိရမိသွားစေပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးပြနိုင်တဲ့ ဒါရိုက်တာ Peyton Reed ကိုချီးကျူးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Trailer ထဲက Wasp တစ်ယောက် ရန်သူကပစ်လိုက်တဲ့ဓားပေါ်မှာ ပြေးသွားတာ၊ Hank Pym က သူတို့စခန်းချနေထိုင်တဲ့တိုက်တစ်ခုလုံးကို ခရီးဆောင်သေတ္တာအရွယ် ချုံ့ပလိုက်တဲ့အခန်းတွေကတော့ စိတ်ထဲမှတ်မှတ်ရရကျန်ခဲ့တာလေးတွေပါ။ နောက်ပြီးတော့ Hello Kitty ခွက်သေးသေးလေးကို ဧရာမကြီးချဲ့လိုက်ပြီး ရန်သူ့ဆီကိုပစ်လိုက်တဲ့အခန်းမှာ အဲ့ scene ထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေရဲ့ contrast ကွာပုံကိုတွေးမိပြီး ခပ်ဟဟလေး ရယ်မိသွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် MCU ပရိသတ်တွေအတွက် တွေးစရာလေးတွေလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။ Trailer စစချင်းမှာ Ant-Man က Wasp ကို “တကယ်လို့ Cap ကသာ အကူအညီတောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် မင်းလာကူညီမှာလား” လို့မေးတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ အဲဒါဟာ Captain America: Civil War တုန်းက Captain America က Ant-Man ကိုအကူအညီလာတောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို Wasp က “မပြောတတ်ဖူးလေ” လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အဖြေပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလည်း.. Civil War မှာ The Wasp ပါဝင်နိုင်ခြေရှိခဲ့တာလား.. စဉ်းစားစရာလေးပါပဲ။
Ant-Man and The Wasp ကို ဇူလိုင် ၆ ရက်နေ့ကျရင် စတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ မှာထွက်ရှိမယ့် စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ Horror ကား ၁၀ ကား
ကဲ.. ညကြီးသန်းခေါင် သရဲကားတွေ၊ Horror ကားတွေကြည့်ရမှ စားဝင်အိပ်ပျော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကိုကိုမမတွေအတွက် ၂၀၁၈ အတွင်းမှာစောင့်ကြည့်သင့်တယ်လိုထင်ရတဲ့ Horror ဇာတ်ကား ၁၀ ကားကိုရွေးချယ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီ list ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ အချို့ဇာတ်ကားတွေကလွဲပြီး အများစုကမထွက်ရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် calendar မှာမှတ်ထားလို့ရအောင် ထွက်ရှိမယ့်ရက်တွေကိုပါ တစ်ပါတည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုကြည့်ပြီး ဘယ်ဇာတ်ကားရုံတင်ရင် Horror ကားမကြိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ဘယ်လိုညာခေါ်သွားမယ်ဆိုတာ ကြိုစဉ်းစားထားလိုက်ကြရအောင်လား.. ? ? ?
Release Date: ဇန်နဝါရီ ၅
Synopsis: ဒီဇာတ်ကားဟာ Horror ဇာတ်ကားပရိသတ်တွေကို အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Insidious ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက စတုတ္ထမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး story chronology အရဆိုရင် ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားမှာ ဒေါက်တာ Elise Rainer တစ်ယောက် သူမရဲ့မိသားစုအိမ်မှာ ဆိုးပေ့ကြမ်းပေ့ဆိုတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရပုံကို ထိတ်လန့်ဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Release Date: ဇန်နဝါရီ ၁၉
Synopsis: မင်းသားကြီး Nicolas Cage ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာ positive review တွေရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ မိဘတွေဟာ ဇစ်မြစ်မသိတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့် စိတ်ရိုင်းတွေဝင်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးတွေကို လိုက်လံသတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Release Date: ဖေဖော်ဝါရီ ၂
Synopsis: San Francisco ရဲ့အပြင်ဖက် မိုင် ၅၀ အကွာမှာ တစ်ရက်ကို ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်ကို ၇ ရက်နှုန်းနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆောက်နေတဲ့ စံအိမ်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီစံအိမ်ကြီးကို Sarah Winchester ကပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီး အထပ်ပေါင်း ၇ ထပ်ရှိကာ အခန်းပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးပါဝင်ပါတယ်။ အပြင်ကလူတွေကတော့ ဒီအဖွားကြီးတစ်ယောက်ရူးပြီးလုပ်ချင်ရာလုပ်တယ်လို့မြင်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာကျတော့ သူ့ခင်ပွန်းရဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့သေနတ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ ဝိဉာဏ်တွေကိုပိတ်လှောင်ထားဖို့ အကျဉ်းထောင်တစ်ခုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Release Date: ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃
Synopsis: အမျိုးအမည်အသိတဲ့နေရာတစ်ခုကို စူးစမ်းလေ့လာဖို့အတွက် လူတွေလွှတ်ရာမှာ Lena ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Oscar Isaac တစ်ယောက်တည်းသာ ဒဏ်ရာအပြည့်နဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူ့ခင်ပွန်းအဲဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် ဇီဝဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Lena ဟာ နောက်ထပ်စူးစမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့နဲ့အတူ အဲဒီနေရာကိုလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။
Release Date: မတ် ၉
Synopsis: ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Strangers ရဲ့ sequel ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ အပန်းဖြေခရီးထွက်လာတဲ့မိသားစုတစ်စု အမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ခရီးတစ်ထောက်နားမိရာကနေ မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ psychopath ၃ ယောက်တို့ရဲ့ရန်ကို ရင်ဆိုင်ကြရပါတော့တယ်။
Release Date: ဧပြီ ၆
Synopsis: မိသားစုတစ်စုက လူတွေနဲ့ဝေးရာနေရာတစ်ခုမှာ သီးသီးသန့်သန့်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အသံထွက်ရာနောက်ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ အမျိုးအမည်မသိအရာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့မိသားစု နေ့စဉ်ဘဝကို အသံမထွက်ပဲဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြမလဲ၊ မတော်တဆထွက်သွားတဲ့အသံကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်တွေဘယ်လိုကြုံကြရမလဲဆိုတာကတော့ တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ဆန်းပြားတဲ့ဇာတ်အိမ်ကြောင့် ဒီတစ်ခုကိုတော့ အများကြီးမျှော်လင့်မိပါတယ်။
Release Date: ဧပြီ ၁၃
Synopsis: ကျောင်းသားတစ်စု သဘာဝလွန် Truth or Dare ကစားနည်းကိုကစားမိပြီး အသက်ဘေးရန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကစားနည်းမှာ Truth မပြောရင်ဖြစ်စေ၊ Dare ကိုငြင်းခဲ့ရင်ပဲဖြစ်စေ အဲဒီလိုလုပ်တဲ့သူက အသေဆိုးနဲ့သေဆုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းသားတစ်စုအနေနဲ့ ကျိန်စာကိုပြေပျောက်စေမယ့်နည်းလမ်းကို အသက်လုပြီးရှာဖွေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Release Date: ဇူလိုင် ၄
Synopsis: ဒီဇာတ်ကားဟာ ပထမဆုံး The Purge ဇာတ်ကားမတိုင်မီက အဖြစ်အပျက်တွေကို ရိုက်ပြထားတဲ့ prequel ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ပထမဆုံး Purge event ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ရိုက်ကူးဖော်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ The Purge ဇာတ်လမ်းတွဲကိုနှစ်သက်သူတွေကို အထူးတလည်ညွှန်းစရာမလိုလောက်ပါဘူး။
Release Date: ဇူလိုင် ၁၃
Synopsis: Conjuring ကမ္ဘာကြီးထဲမှာဇာတ်အိမ်တည်ထားပြီး Conjuring series ထဲက ပဉ္စမမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ကာ ၁၉၅၂ အချိန်ကာလမှာဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံက Cârța Monastery မှာ Nun တစ်ယောက် သေကြောင်းကြံစည်တဲ့အမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက် ဗာတီကန်က Priest တစ်ယောက်၊ Nun တစ်ယောက်နဲ့ Novitiate တစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့တွေဟာ Nun အသွင်ယူထားတဲ့ Valak လို့အမည်ရတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်။
Release Date: သြဂုတ် ၃
Synopsis: ၁၉၈၇ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး Predator ဇာတ်ကားရဲ့ sequel ဖြစ်ပါတယ်။ Project စတင်တုန်းက reboot အဖြစ်စီစဉ်ထားခဲ့ပြီး နောက်မှ sequel အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စစ်သားတစ်သိုက် တောအုပ်ထဲမှာ လမ်းပျောက်နေရာကနေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပျောက်ဆုံးသွားကြပါတယ်။ နောက်မှ အရိုးပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ အလောင်းတွေကို ပြန်လည်ရှာတွေ့ကြပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အခြေအနေတွေက မူမမှန်ဖူးဆိုတာကိုရိပ်မိလာချိန်မှာတော့ သူတို့အားလုံး ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Release Date: သြဂုတ် ၂၄
Synopsis: အင်တာနက် meme ကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ Slenderman က နောက်ဆုံးတော့ သူကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်တောင်ထွက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ Slenderman ရှိကြောင်းကိုမယုံကြည်တဲ့ ကောင်မလေး ၄ ယောက်က အဲဒါမရှိဘူးဆိုတာကိုသက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ ritual တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များမကြာမီမှာ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး Slenderman ရှိကြောင်းကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်လာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ အရာရာတိုင်းကနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ.. Slenderman က သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီနောက်ကို ထပ်ချပ်မခွာလိုက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Release Date: ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂
Synopsis: နဂိုက ၂၀၁၈ ဧပြီ ၁၃ မှာပြဖို့လျာထားခဲ့တဲ့ New Mutants ဟာ ကံဆိုးစွာပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှ ၂၀၁၉ အထိအနောက်ဆုတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူအများအရမ်းမျှော်လင့်နေကြတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်လို့ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ Superhero ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားထဲက ရှားရှားပါးပါး Horror ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ X-Men ရဲ့ mutant တွေရဲ့ universe မှာဇာတ်အိမ်တည်ထားပြီး X-Men series ထဲက ၁၃ ကားမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ mutant ၅ ယောက်ဟာ လျှို့ဝှက်နေရာတစ်ခုမှာ ထိန်းချုပ်ခြင်းခံထားရပြီး အဲဒီနေရာကနေလွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားကြတာကို သည်းထိတ်ရင်ဖိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဇာတ်ကားတွေကြိုက်ရင် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ Annihilation
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Annihilation ကို February လမှာရုံတင်ပြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်သစ်တခုကို စစ်သားအုပ်စုတစ်ခုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်သားအုပ်စုထဲမှ Oscar Isaac တစ်ယောက်ကတော့ အနာတရဖြစ်ပြီး ပူဆွေးသာကရောက်နေသော်ငြားလည်း အသက်ရှင်ရက်နဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ Oscar Isaac ရဲ့အသက်ကို save ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တော့ သူ၏ဇနီး Lena က သပ္ပံပညာနှင့်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရန်နဲ့ အခြားသောလေ့လာစရာများအတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ zone ကို volunteer များအတူ ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ zone ဖြစ်လို့ Lena နဲ့ သူမရဲ့ volunteer တွေ ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ပြီး အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကို annihilate လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မြင်တွေ့ခံစားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြိုခံစားဖို့အတွက် official trailer မှာလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။
‘Indiana Jones 5’ က Steven Spielberg ရဲ့ နောက်ရိုက်မယ့်ဇာတ်ကားအဖြစ်အတည်ပြု
မနှစ်က ဇာတ်ညွန်းတွေဖန်တီးပြီးပြီလို့သတင်းထွက်ပြီးကတည်းက ပျောက်ချက်သားကောင်းနေခဲ့တဲ့ Indiana Jones5ဟာဆိုရင် နောက်ဆုံးတော့ ရိုက်ကူးရေးစတင်မယ့်အချိန်ကိုသိရှိရပြီဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ Steven Spielberg ရဲ့ Ready Player One ရုံတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ project ကိုလက်စသတ်ပြီးတာနဲ့ Indiana Jones ဖက်ကိုခြေဦးလှည့်မှာဖြစ်တယ်လို့ Spielberg ကဆိုပါတယ်။ အချိန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်တော့ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပေမယ့် ရိုက်ကူးရေးတွေကို ၂၀၁၉ ထဲစတင်ပြီး ၂၀၂၀ ထဲရုံတင်နိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ယမန်နှစ်တုန်းကသတင်းတွေအရဆိုရင် ဒီဇာတ်ကားမှာ Indiana Jones အဖြစ် Harrison Ford ကပြန်လည်ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Shia LaBeouf ကတော့ ပြန်လည်ပါဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အကြမ်းဖျဉ်းလောက်ပဲသိရှိရပါသေးတယ်။ အဲဒါကလည်း အရမ်းအဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး.. Indiana Jones ဇာတ်ကားတွေထုံးစံအတိုင်း လူတိုင်းလိုချင်တဲ့ artifact တစ်ခုနောက်ကိုလိုက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အောင်မြင်ပြီးသားဖော်မြူလာ၊ လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဇာတ်အိမ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ဇာတ်ညွှန်းက Kingdom of Crystal Skull ထက်ပိုကောင်းရင်ကိုအိုကေပါတယ်။
Spielberg ကတော့ သူ့ဝသီအတိုင်း ဇာတ်ကားတွေကိုတောက်လျှောက်ကိုရိုက်ကူးနေပါတယ်။ Ready Player One ပြီးတော့ Indiana Jones 5.. အဲဒီနောက်မှာတန်းစီနေတာတွေကတော့ Musical တစ်ခုဖြစ်တဲ့ West Side Story ရဲ့ remake, David Kertzer ရဲ့စာအုပ် The Kidnapping of Edgardo Mortara ရဲ့ adaptation, စစ်သတင်းထောက် Lynsey Addario ရဲ့ဘဝအကြောင်းကို မှီငြမ်းရိုက်ကူးမယ့် It’s What I Do တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက ကြားထဲမှာ Spielberg ကောက်ကာငင်ကာစိတ်ဝင်စားလို့ ရိုက်ကူးနိုင်ခြေရှိတာမျိုးတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။
သားသားမီးမီးတို့နဲ့အတူ လူကြီးမိဘတွေပါ အတူတကွရယ်မောနိုင်စေမယ့် Peter Rabbit
၂၀၁၈ ရဲ့ 3D live-action ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Peter Rabbit ကို မကြာခင်ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာဆိုရင် ပုံပြင်ကိုအခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Animation ဖြစ်တဲ့အတွက် သရုပ်ဆောင်ပီပြင်တဲ့ Peter Rabbit လေးနဲ့အတူ တခြားချစ်စရာကောင်းတဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဟန်ပန်လေးတွေကိုပါ မြင်တွေ့ရအုံးမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ Thomas McGregor နဲ့ Peter Rabbit တို့ ချစ်ဟန်ဆောင်ပြီး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် သူနိုင်ကိုယ်နိုင် ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဟာသလေးတွေနှောထားတဲ့အတွက် သားသားမီးမီးတို့လည်း ကြိုက်နှစ်သက်မှာ သေချာသလို လူကြီးလူငယ်တွေလည်း ပျော်ရွှင်ရယ်မောရမှာ သေချာပါတယ်။ အစကတော့ Peter Rabbit ရုပ်ရှင်ရဲ့ release date ကို ၂၀၁၈ ရဲ့ March 23 လို့ ပြောကြားထားပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ February9မှာ ပြသမယ်လို့ ပြောင်းလဲရွေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ Family ကြည့်လို့ရမယ့် ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တာမို့ holiday မှာကြည့်ဖို့အတွက် မကြာခင်ရုံတင်တော့မှာဖြစ်လို့ အခုကတည်းက နားစွင့်ထားကြနော်။
3D live-action, Animation